တရုတ်နိုင်ငံမှ Wireless Remote Smart Wall Light Switch ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများကို လျှော့စျေး
1. Wireless Remote Smart Wall Light Switch ၏ ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
-- Update1- "Live+Neutral Wire" နှင့် "Live Wire များသာ (Capacitor မလိုအပ်ပါ)" နှစ်မျိုးလုံးနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ပိုအဆင်ပြေပြီး ပိုကောင်းတဲ့ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ။
-- Update2- APP ရှိ 2/3 Way Muilti-Control Association သည် ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့် (2/3 Way wiring ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ)
-- အပ်ဒိတ် 3- အသုံးပြုသူမှ APP တွင် Backlight ဖွင့်/ပိတ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
-- အပ်ဒိတ် 4- လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ပါက မမ်မိုရီကို ပါဝါပိတ်ပါ။
2. Wireless Remote Smart Wall Light Switch ၏အင်္ဂါရပ်များ
Wireless Remote Smart Wall Light Switch အတွက် အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
1. ကြားနေဝါယာကြိုး လိုအပ်သည့် ဒီဇိုင်းသစ်နှင့် ခလုတ်အကန့်တစ်ခုတွင် ပါရှိသည့် တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုး၊ တစ်ခုတည်းသော တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးဗားရှင်းအတွက် ကြားနေဝါယာကြိုးများ မလိုအပ်ပါ၊ လိုအပ်သည့်အခါ ခလုတ်တွင် ကြားနေဝါယာကြိုးကို ကြိုးပေးလိုက်ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသုံးပြုသူအတွက် အပ်ဒိတ်ဗားရှင်းအသစ်အတွက် ကာဗာစီတာ မလိုအပ်ပါ။ လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းမှ ဆူညံခြင်းမရှိသော အတွေ့အကြုံ၊ ဤခလုတ်၏ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွက် Tuya Zigbee hub လိုအပ်သည်၊၊ အခြား hubs များထက် tuya စမတ်ကိရိယာများနှင့် များစွာလိုက်ဖက်မှုရှိကြောင်း ပြသထားသည်။ ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်း Smart Wall Light Switch
2. 2/3 Way circuit အတွက် အိုင်ဒီယာအသစ် (ခလုတ်နှစ်ခုက မီးတစ်လုံးကို ထိန်းချုပ်သည်) ဤခလုတ်ကို အက်ပ်ရှိ အခြားသော စမတ်ခလုတ်များသို့ အများအပြား ထိန်းချုပ်ချိတ်ဆက်မှုအဖြစ် ရှင်းပြထားသည်; ပါဝါပိတ်ချိန်နှင့် နောက်ခံမီးခလုတ်များကို မှတ်သားထားသည့်အခါ နောက်ဆုံးအခြေအနေအား ဖွင့်/ပိတ်ပါ ညဘက်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်နိုင်စေရန် Smart Life အက်ပ်တွင် ဆက်တင်၊ capacitive touch ထိန်းချုပ်မှု၊ တစ်ချက်ထိရုံဖြင့် သင့်အလင်းရောင်ကို အဖွင့်/အပိတ် နှင့် ခြစ်ရာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော မှန်အကန့်ဖြင့် မည်သည့်နံရံဒီဇိုင်းနှင့်မဆို ရောစပ်ရန် အကောင်းဆုံးပုံစံကို ပေးသည်။(မှတ်ချက်- သင် multi-control တွဲဖက်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤခလုတ်သည် မတူညီသော ခလုတ်များစွာသို့ ပြောင်းသော်လည်း ခလုတ်တစ်ခုရှိ ဂိုဏ်းအများအပြားကို မရနိုင်ပါ၊ ခလုတ်တစ်ခုရှိဂိုဏ်းတစ်ခုကသာ ထိန်းချုပ်မှုပေါင်းများစွာအတွက် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။) Wireless Remote Smart Wall Light Switch
3. သမားရိုးကျ ဘုံခလုတ်များမှ အင်္ဂါရပ်များ ကွဲပြားသည်၊ ဤစမတ်ခလုတ်သည် အက်ပ်ထိန်းချုပ်မှု၊ ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသံထိန်းချုပ်မှုကဲ့သို့သော အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးဖြင့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ 2/ ရရှိရန် အခြားသော စမတ်ခလုတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် Multi-control ကို ရယူပါ။ သင့်အိမ်မီးများအတွက်3လမ်းပတ်လမ်း။
4. Alexa၊ Google home နှင့် Yandex တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အခမဲ့ အသံထိန်းချုပ်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။ Smart Life/Tuya အက်ပ်မှတစ်ဆင့် သင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် ခွင့်ပြုထားသည့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဆက်တင်များကို အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်; အက်ပ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများကို အချိန်တိုင်း၊ အချိန်ဇယားများနှင့် နှစ်သစ် (1/5/30 မိနစ်၊ 1 နာရီ စသည်ဖြင့်) အပြည့်အဝထိန်းချုပ်လိုက်ပါ။ ; ထပ်လောင်းအဆင်ပြေစေရန်အတွက် မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သော Wireless Remote Smart Wall Light Switch
5. သင့်အိမ်၏ဝိုင်ယာကြိုးကန့်သတ်မှုအတွက် ဗားရှင်းမှားဝယ်ခြင်းအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါ။
Hands-free Voice Control Wireless Remote Smart Wall Light Switch
--Amazon Alexa နှင့် Google Home တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
-- သင့်စက်ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရန် အသံဖြင့် သင့်လက်များကို အခမဲ့ထားပါ။
--Smart Life အက်ပ်နှင့် Tuya ပေါ်အခြေခံ၍ သင့်စက်ပစ္စည်းများကို အဝေးမှထိန်းချုပ်ပါ။
--သင်အိမ်နှင့်ဝေးသောအခါ၊ Moes မီးခလုတ်သည် သင့်အား မည်သည့်နေရာတွင်မဆို သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် သင့်အိမ်ရှိ မည်သည့်မီးလုံးများ သို့မဟုတ် ပန်ကာကို အဝေးမှ ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။
လက်ဖရီး Voice Control
--Amazon Alexa သို့မဟုတ် Google Assistant နှင့် တွဲပြီးပါက၊ သင့်အသံဖြင့် သင့်မီးများကို ဖွင့်နိုင်သည်၊ ပရိသတ်များကို မျက်နှာကြက်ကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်သည်။
-- ကြိုက်တဲ့အချိန်တိုင်း လက်ကို လွတ်ပေးပါ။
အချိန်ဇယားနှင့် အချိန်တိုင်းကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
-- နေထွက်ချိန်နှင့် နေဝင်ချိန်များသို့ အဖွင့်အပိတ်အချိန်များကို စင့်ခ်လုပ်ပါ။
Day Programmable Set Single/Repeat/Delay/Cycle စသည်ဖြင့်။
--အခမဲ့ 'Smart Life' APP ကို ​​အသုံးပြု၍ နေဝင်ချိန်၌ မီးဖွင့်ရန်၊ သို့မဟုတ် အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းဖြင့် သင်မရောက်မီ ပန်ကာကိုဖွင့်ရန် သင်စီစဉ်နိုင်သည်။
--စမတ်ခလုတ်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော မီးလုံးများ၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်သည့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး မည်သည့်နံရံဒီဇိုင်းဖြင့် ရောစပ်ထားသည်။
- နံရံတွင်ရှိသော မည်သည့်ပုံမှန်ခလုတ်မဆို (2/3/4 ဂိုဏ်း) ကို စမတ်အလင်းခလုတ် (2/3/4 အုပ်စုလိုက်ခလုတ်ပြား အပါအဝင်) ဖြင့် အလွယ်တကူ အစားထိုးပါ။
3. Wireless Remote Smart Wall Light Switch ၏ အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ
မက်။ နှင့် Min Load- 220V: 3-600W(INC), 3-120W(LED,CFL)
110V: 3-300W(INC), 3-120W(LED,CFL)
ကြိုးမဲ့ ကြိမ်နှုန်း- ZigBee
အက်ပ်- Tuya APP၊ Smartlife အက်ပ်
Universal ချိတ်ဆက်မှု 1- တိုက်ရိုက်+ကြားနေဝိုင်ယာ
Universal ချိတ်ဆက်မှု 2- တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးသာ ( Capacitance မလိုအပ်ပါ )
hot Tags:: ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်း Smart Wall Light Switch၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းနေ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်